Inkukhu isitshulu nama-artichokes, iresiphi yendabuko ecebile | Ukupheka Kwekhishi
Ngingumthandi wesitshulu, angizikhiphi ekudleni kwami ​​ngisho nasehlobo, yize ngizidla ngezikhathi ezithile ngaleso sikhathi. Lesi sitshalo senkukhu siyisitsha esiphelele kakhulu sibonga okukhulu umnikelo wemifino futhi kuyindlela yokubangenisa ekudleni kwalabo abamelana kakhulu nabo.
Njengoba sonke isitshulu sidinga isikhathi saso sokupheka, isikhathi ongasisebenzisa ngokunenzuzo ukufunda noma ukwenza eminye imisebenzi yasendlini, isikhathi asisona isizathu salokhu! Iphunga elizokhipha lokhu ekhishini lakho inkukhu isitshulu futhi ukunambitheka kwayo kuzokukhuthaza ukuthi uyiphinde kaningi, ngiqinisekile. Indlela elula yokupheka inkukhu, njengoba kwakungu- inkukhu enososo nge-chorizo iresiphi yakhe u-Ale akukhombise yona muva nje.
Amathanga enkukhu ayi-6
Izinhliziyo eziyi-8 ze-artichoke (ezisemathinini)
1/2 upelepele obomvu
200 g uphizi
1 ingilazi yewayini elimhlophe
1 iqabunga le-bay
Epanini sibeka faka u-anyanisi oqoshiwe ngokufafazwa ngamafutha ashisayo. Ngemuva kwemizuzu embalwa engeza upelepele oqoshiwe nefayela le- izaqathe zisike zibe ngamasondo futhi zithose kuze kube yilapho imifino ithamba, ivusa ngezikhathi ezithile ngesipuni sokhuni.
Bese ufaka amathanga enkukhu akhethiwe ku-casserole neqabunga le-bay bese gazinga kuze kube nsundu amathanga. Ngemuva kwalokho sinisela ingilazi yewayini elimhlophe bese silinda imizuzu embalwa ukuthi utshwala bube bungaphezulu buphele.
Okulandelayo, sengeza izingilazi ezimbili zamanzi ku-casserole bese simboza. Sipheka ngokushisa okuphansi Imizuzu engama-45 noma kuze kube yilapho amathanga enkukhu ethambile. Siyagovuza ngezikhathi ezithile bese sengeza uketshezi oluningi uma kunesidingo.
Imizuzu eyi-10 ngaphambi kokuqeda ukupheka, engeza ama-artichokes nophizi kusitshulu sethu. Ngemuva kwaleso sikhathi sisusa bese sikhonza okushisayo.
Kubalulekile kulesi sitshalo ukuthi ama-artichokes asezingeni elifanele; Ngisebenzise izinhliziyo ze-artichoke zeGutarra Selección, ezenziwe ngendlela engokwemvelo nethenda langempela. Ama-alchachofas bahlinzeka ngoshukela ongatholakala ngaphandle kwe-insulin ngakho-ke banconyelwa abanesifo sikashukela; Ziphinde zikhuthaze ukuhanjiswa kwamathumbu emathunjini, ziyi-diuretic yemvelo futhi zisiza ukulawula ukusebenza kwesibindi, izinso ne-gallbladder. Ngabe udinga ezinye izizathu zokuzifaka ekudleni kwakho?
Imininingwane engaphezulu - Inkukhu isoso nge-chorizo, iresiphi yendabuko
Isikhathi sokupheka Imizuzu ye-45
Isikhathi esiphelele Ihora eli-1 nemizuzu engama-05
Ama-Kilocalories ngokusebenza ngakunye 320
General, Inyama Ungadliwa, Izitishi Namasobho Ungadliwa
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Inyama Ungadliwa » Inkukhu isitshulu nama-artichokes nophizi